OMN: Guyyoo, Abrahaam, Caaltuu – Waggaa 7ffaa OMN Ilaalchisee – Kichuu
HomeAfaan OromooTVOMN: Guyyoo, Abrahaam, Caaltuu – Waggaa 7ffaa OMN Ilaalchisee
Abiyyi Ahmad miira gaddaatin waraanni Itoophiyaarratti labsamuu dubbatee jira. Kana boodaan wanti godhuu dandeenyu hin jiru jedhe. Ummanni Itoophiyaa nu cinaa yoo dhabbate malee rakkoo guddaan biyya teenya mudatee jira waliin taanee ofirraa haa deebifnuu jedhe.
Rakkoon kokkee geenyaan amma ummata Oromootti wawwaatuu eegalee jedhan hayyoonni siyaasaa. #Share
Baga Waggaa 7ffaa OMN tiin nu gehe!
OMN miidiyaa qofaa miti. Sagalee qabsoo oromoo fii utubaa tokkummaa oromoo ti. OMN jabaachuun oromoon jabaachuudha. Dhiibbaa kharaa adda addaatiin irratti godhamaa ture hunda irra dabree waggaa 7 gahuun gammachuu oromoo hundaati.
Akka BBS tti yeroo jalqabaatif satalaytii OMN irratti sagantaan keenya dabruu jalqabe. Akka miidiyaa oromoo kaayyoo tokkoof hojjatutti waliin hojjachuu kan jalqabne gaafa san ture.
Erga Studio OMN Finfinnee cufame irraa kaasee OMN yeruma sana hojii isaa akka itti fufuuf studio BBS kan Cairo, Egypt jirutti hangasuu akka waliin hojjannu waliif gallee hojjachaa turre. Hojjattoonni OMN fii BBS akka obbolaatti waliin nyaataa waliin dhugaa hojii isaanirratti wal gargaaraa waliin hojjachaa turanii ammallee itti jiran.
Gara Biraatiin hoggantoonni OMN, BBS fi Kello yero yerotti wal qunnamuu dhaan bakka kaanirra Hirrate kaan guutaa akka waliin hojjatanirratti mariachaa waliin hojjataa jirra. Kun waan bakka hundatti jabeeffamuu qabu dha.
Walumaa galatti OMN hangafa Miidiyaa oromoo fii miidiyaa qabsoo oromoo nutilleen akka fakkeenyaatti laalaa, irraahis barachaaa waliinis hojjachaa jirruu fii fuuldurallee kana daran jabaanne akka waliin hojjannee ummata keenyaaf sagalee taanu nus waadaa keenya haaromsina.
Ammallee irra deebinee waggaa 7ffaa hundeeffama OMN baga geessan baga geenye isiniin jenna.
Yoomiyyuu jiraadhaa, guddadhaa dagaagaa!
Har’a Impaayerri (Empire) Milinik raafamaa jira..!!
~ Abiyyifi Dammaqeefi tuutni immiyyee masaraa keessa jirtu muddamsuu guddaa keessa jirti…!!
~ Qaalaynsi jireenya Finfinnee dabalatee guutuu Biyyatti keessatti mudachaa jiruus Mormii nutti dhoosa jachuun raafama jiru…!!
~ Dammaqee Mokonnen mana marii Nageenya addunyaatti afeerame hafuun isaatiin wal qabate Dammaqeefi Abiyyi gidduuttis mufannaan akka jirtus beekkameera…!!
~ rakkinni guddaan Impaayericha raasaa jiru guddaan Addunyaan deeggarsa Itoophiyaaf godhaa turte muruun qoqqobbii diinagdee Itoophiyaa irraa kaa’uuf deemtuun wal qabatee bara dhufu baayyanni biyyattiif ramadamu dhabamu danda’a kan jadhuun wal qabatee raafama guddaa keessa akka jiran beekkameera…!!
~ Hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa gara hin taanetti deemaa jirti….!!
Odeeffannoon kun baay’ee murteessaadha waliif Dabarsaa…!!